Main’ny afo natsangany | NewsMada
Par Taratra sur 27/08/2019
Mandrora mitsilany raolombelona amin’ity ala may any Amazonia any amin’ny tapany Amerika Atsimo ity. “Havokavoky ny planeta tany” ny fiantso ity ala ity, miantoka ny fahaveloman’ny zavamananaina sy tany amin’ny ankapobeny mihitsy, mandrindra ny toetr’andro sy ny toe-tany. May ny afo natsangany satria isika olombelona ihany no mandoro azy nefa miantraika mivantana amintsika ihany avy eo.
Efa iaraha-miaina ny fiovan’ny toetry ny andro. Tsy mbola nisy hafanana migaingaina toy ny tamin’ity taona ity tany Eoropa, nihoatra ny 40°C. Resahana isan’andro, fototry ny zavatra hatao rehetra ny lafiny tontolo iainana amin’izao fotoana izao.
Tsy ny alan’Amazonia ihany no tandindomin-doza, azo tsorina fa loza mihatra mihitsy, fa anisan’ny tompondakan’ny fanapotehana ny ala koa i Madagasikara, nahatratra 510.000 ny taona 2017, ary 192.000 ha ny taona 2018. Maro ny tanjona na ny vina na ny paikady hapetraka, saingy kely ny vokatra, ny fihatsaran’ny tontolo iainana raha oharina amin’ny voka-dratsy.
Atao foana ny fanentanana, saingy tsy hita soritra ny fahatongavan-tsaina na ny asa mivaingana azo tsapain-tanana. Miafina ao ambadiky ny fahantrana, nefa koa hita fa mibahana ny fitiavan-kely, ny tsy te hisasatra, ny fikarohana “vola mora azo”, fa tsy mijery lavitra sy tsy mitsinjo ny taranaka. Mampalaza an’i Madagasikara ny trafika andramena sy ny sokatra, samy harena voajanahary, ary tsy nitondra fampandrosoana ho an’ny mpiara-belona ny vola azon’ireo mpanao trafika tamin’ireny. Tsy nampivoatra ny fiainan’ireo mpanimba ala ny fandripahana ala, ny fikarohana harena an-kibon’ny tany. Eny, na ny fambolena natao aza tsy nampandroso antsika akory. Mandrora mitsilany ary may ny afo natsangany isika ary miantraika any amin’ny tarantsika.